တောင်သမန်သားလေး: Facebook နှင့် Viber အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် တယ်လီနော၏ “စိတ်ကြိုက်” အစီအစဉ်သစ် စတင်
Facebook နှင့် Viber အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည့် တယ်လီနော၏ “စိတ်ကြိုက်” အစီအစဉ်သစ် စတင်
တယ်လီနော မြန်မာလီမိတက် (တယ်လီနော) မှ သုံးစွဲသူများအတွက် အသက်သာဆုံး အသံနှင့် ဒေတာများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးမည့် ရည်ရွယ် ချက်ကို ပိုမိုထိရောက်စေရန် ဈေးနှုန်း အစီအစဉ် အသစ်တစ်ခုကို စတင် မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက် မှ စတင် ကာ “စိတ်ကြိုက်” ဟု အမည်ပေးထားသော အစီအစဉ်သစ်ကို စတင် အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ အစီအစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံး အင်တာ နက် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် Facebook နှင့် Viber ကို အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။
“စိတ်ကြိုက်” အစီအစဉ်ကို သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ အတွက် (ည ၇ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီ) အတွင်း ဖုန်းပြောဆိုမှုအတွက် တစ် မိနစ် ၂၀ ကျပ်နှင့် ဒေတာ (အင်တာနက်သုံးစွဲမှု) အတွက် 1MB/ ၆ ကျပ်နှုန်း ဖြင့် လည်းကောင်း၊ (မနက် ၇ နာရီမှ ည ၇ နာရီ) အတွင်း တစ်မိနစ် ၂၅ ကျပ် နှင့် 1MB/ ၈ ကျပ်နူန်းဖြင့် လည်းကောင်း သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“စိတ်ကြိုက်” အစီအစဉ်ကို ရယူလိုပါက ၃၆၅ သို့ SK ON ဟု ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ၊ *365*3# သို့ ခေါ်ဆို၍ဖြစ်စေ တယ်လီနော Call Center ၀၉၇၉၀၀၉၇၉၀၀ (တယ်လီနောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ၉၇၉ သို့လည်းကောင်း) ခေါ်ဆိုရယူ နိုင်ပြီး စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ် ၀န်ဆောင်မှုကို ပထမဆုံး အသုံးပြုရန် ခေါ်ဆို ရယူသည့်နေ့မှ စတင်ပြီး Facebook နှင့် Viber ကို (၇) ရက် အခမဲ့ အသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း (၇) ရက် ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သုံးစွဲသူ၏ ငွေဖြည့်မှု အနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက် ရရှိသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်မှ Facebook နှင့် Viber ကို (၇) ရက် အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့် အတွက် ကျသင့်မည့် နူန်းထားများမှာ ၇ ရက် ပြီးနောက် ၃၀၀၀ ကျပ် အထိ ထပ်မံ ငွေဖြည့်ပါက ၅ ရက်ကြာ အခမဲ့၊ ၃၀၀၀ မှ ၉၉၉၉ ကျပ် အထိ ထပ်မံ ငွေဖြည့်ပါက ၁၀ ရက်ကြာ အခမဲ့ နှင့် ၁၀၀၀၀ ကျပ်အထိ ထပ်မံ ငွေဖြည့် ပါက ၃၀ ရက်ကြာ အခမဲ့ သုံးစွဲခွင့်များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
“တယ်လီနော သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ တယ်လီနောက အသံနဲ့ ဒေတာ (အင်တာ နက်) ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ဆန်းသစ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ဆက်လက် ၀န် ဆောင်မှု ပေးမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီစိတ်ကြိုက် အစီအစဉ်သစ် ကလည်း Facebook နဲ့ Viber လို လူမှုကွန်ရက်တွေကို အသုံးပြုဖို့ သဘော ကျ သူတွေအတွက် ဒီအစီအစဉ်တွေကို အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး မိတ်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းက သုံးစွဲသူတွေလည်း ဒီအစီအစဉ် ကို သဘောကျမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တယ်လီနော သုံးစွဲသူ ၁၆ သန်းထဲ က ၆၀ ရာခိုင်နူန်းထက်ပိုတဲ့ လူတွေဟာ ဒေတာကို သုံးစွဲကြပါတယ်” ဟု တယ်လီနော မြန်မာ၏ Chief Marketing Officer Mr Joslin Myrthong က ပြောသည်။
တယ်လီနော၏ စာတို (SMS) ၀န်ဆောင်မှု၊ IDD နှင့် Roaming ၊ လက်ကျန် ငွေ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ကြိုသုံးနှင့် MyTune စသည့် အခြား ၀န်ဆောင်မှုများ သည် ဈေးနူန်း ပြောင်းလဲမှု မရှိဘဲ မူလအတိုင်းဖြစ်ပြီး တယ်လီနော My Internet အစီအစဉ်သည် ၅ကျပ်/MB နူန်းထားဖြင့် အခြေခံ ဈေးနူန်းအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးသို့ ၅,၇၀၀ ကျော်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည့် တယ်လီနောမှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ်ကို ပိုမို အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက www.telenor.com.mm/ တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by lin linn at 5:26 AM
LG V30 ရဲ့တန်ဘိုးနည်းဗားရှင်းအနေနဲ့ ထွက်လာမယ့် LG Q8 +
Myanmar TV Channel Apk
KingRoot v4.95 ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ
Android OS ဖုန်းတွက် Root ဆော့ဖ်ဝဲပေါင်း (၅၀) ကျော...
သင်္ချာပုစ္ဆာတွေကို ရေးလိုက်တာနဲ့ အင်တာနက်မလို အဆင့်လ...
ဖုန်းဖြင့် Skype Account ဖွင့်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည...
ဖုန်းဘားတန်းလေးကို ကာလာအစုံဒီဇိုင်းအစုံနဲ့ အသုံးပြ...
ဗီဒီယိုတွေမှာ အသံဖြောက်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာသီချင်းနဲ...
ဖုန်းဖြင့် Facebook မှာ ဗီဒီယိုတွေကို အလွယ်ကူဆုံး ...
မြန်မာစာရေးမရဖတ်မရဖြစ်နေတဲ့ Samsung ဖုန်းများတွက်
ဖုန်းဘေမကုန်ပဲ Android ချင်း စကားပြောလို့ရမယ့်နည်း...
Samsung Galaxy A8 ကို မြန်မာစာဘယ်လိုထည့်ကြမလဲ?
“Global ROM ဖြင့် တရားဝင်တင်သွင်းနေသည့် Mi Max ဟန်...
Samsung Galaxy J5 (2016) ကို Root ဖေါက်ချင်သူများအ...
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ Add လို့မရအောင်ပိတ်...
Facebook မှာ အီးမေးလ် ကို OnlyMe လုပ်နည်း
Facebook မှာ မြန်မာစာ မှန်ကန်သွားစေမည့် နည်းလမ်း
ဖုန်းဖြင့် ဗီဒီယိုတွေကို အလန်းဆုံးရိုတ်ကူးနိုင်တဲ့...
iOS 9.3.3 ကိုကွန်ပျူတာမလိုဘဲ Jailbreak ပြုလုပ်ခြင်...
တယ်လီနောမြန်မာမှ အင်တာနက် ၂ ဆရရှိမည့် စူပါ ၂ ဆ အစီ...
မိမိ Wifi ကို လာရောက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိ...
“Facebook ကသူ့ Mobile App ကနေ ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုပ...
သင့် Timeline မှ ပို့စ်များကို အခြားလူများ မမြင်အေ...
Android 4.4.x ကနေ 7.0.x အထိ မြန်မာစာထည့်သွင်းပေးနိ...
Viber မှာ အချက်ပေးသံကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနည်း
Android တွက် အကောင်းဆုံး Ringtone ဆော့ဝဲလ်လေးပါ .....
Sony All Devices များစွာအတွက် Sony All In One Flas...
ယခု​တ​လော ကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ ဖုန်း virus
Android ဖုန်းမှ Virus များကို အပြီးသတ် ဖယ်ရှားခြင်...
Mobile Service သမားများအတွက် စုံလင်သော Firmware မျ...
Facebook က Video တွေကို အလွယ်ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ - Fa...
ချစ်သူစုံတွဲတိုင်းတွက် ချစ်သူဖြစ်တဲ့နေ့ ကိုအမှတ်တရ...
မိမိဖုန်းကို ဖုန်းအလှဆင်နည်း နှင့် ဖုန်းပေါ့သွားသွ...
ယောကျာင်္း/မိန်မအသံနဲ့ အသံတွေပြောင်းပြီး အသုံးပြုနို...
Prisma ပုံတွေမှာ လိုဂိုတံဆိပ်မပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မ...
Prisma Update အသစ်တွင် Gallery ထဲကို Save လို့ရမယ်...
iOS 9.2, 9.3.2, 9.3.3 ကို Jailbreak ပြုလုပ်ပုံ အဆင...
သင့် Facebook Account ကို သင့်သူငယ်ချင်ထံ အမွေပေးထ...
Google PlayStore မှာ Update လုပ်မယ့် App တွေရဲ့ ဖု...
ကိုယ်ဖုန်းမပြောချင်တဲ့သူ ဖုန်းခေါ်လို့မရအောင် ပိတ်...
Apk တွေ သီချင်းတွေ ဂိမ်းတွေ ဗီဒီယိုတွေကို Link လုပ...
ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား ပိုက်ကျော်ခြင်းလုံးဂိမ်း Roll S...
Facebook မှာသုံးဖို့ မှတ်ပုံတင်အတုလုပ်နိုင်မယ့် Ap...
ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကို ရွှေရောင်တွေနဲ့ အလှဆင်ကြမယ်
ကောင်းမလေးဘာလုပ်နေလဲ Live ကြည့်ကြမယ်
ဖုန်းခေါ်ဆို ပြောဆိုမှုတိုင်းကို Auto မှတ်ထားပေးနိုင...
♪ “ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက်VPN” ♫
ချစ်သူဆီကို အချိန်သတ်မှတ်ပြီး SMS ပို့ ထားနိုင်မည်...
Facebook မှာ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Post ကို Friend တွေ ...
ထူးဆန်းတဲ့ အကောင်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးနိုင်...
Facebook Password ပြောင်းသုံးမယ်
Facebook မှာ Email ပြောင်းသုံးမယ်
Facebook မှာ Password ဘဲသိတယ် Email မေ့သွားသွားရင်...
♪ iOS 10 မှာ Lightning Port ရေစိုနေရင် သတိပေးမယ့် ...
♪ Android အတွက် Prisma ရပြီ ♫
Samsung IMEI Error အတွက် OneClick Tool
ဖုန်းတွက် မြန်မာစာ ယူနီကုတ်ဖောင့်တွေ စုစည်းထားတဲ့ ...
Prisma လို ပုံစံတူ Application
Facebook ပေါ်က ခဏရှောင်နေမယ်
Android ပေါ်မှာ Galaxy Note5 မှာပါတဲ့ Air Command စ...
Facebook ကို ခိုးသုံးနေတဲ့သူစစ်ဆေးမယ်
Facebook မှာ မိမိအသုံးပြုခဲ့တဲ့ နာမည် အဟောင်းတွေကိ...
Facebook မှာ ဗွီဒီယို များ အလိုအလျောက် ဖွင့်နေတဲ့ ...
♪ iPhone တွင် အင်တာနက် Data အသုံးပြုမှု ပမာဏကို စစ်...
TT Fontchanger (Extreme)
♪ သင်မသိနိုင်လောက်သေးတဲ့ Facebook အကြောင်းများ ♫
Facebook မှာ သင် Like ထားတဲ့ Page တွေကို သူငယ်ချင်...
ဖုန်းမှာZawgyi Fontနဲ့Unicode Fontကို အပြန်အလှန်ချ...
ဖောင့်စတိုင် မရှိ Root မရှိတဲ့ Android OS တွေကိုမြ...
မြန်မာစာရေးမရဖတ်မရဖြစ်နေတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေတွက်ြ...
Samsung Galaxy ဖုန်းမှာ Root လုပ်စရာ မလိုဘဲ မြန်မာ...
Facebook မှာ ကိုယ်မြင်စေချင်တဲ့သူကို ရွေးပြီးpostတ...
Samsung (2016) ဖုန်းများအတွက် မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင...
၂၀၁၆ တွင် မဖြစ်မနေ သုံးသင့်သည့် အလုပ်တွင်ကျယ်ရေး A...